: at 7/22/2009 01:09:00 PM
သွားဆိုတာ ဘာလည်း ၊ ဘာ လုပ်ဖို့ လည်း ။
( တယ်လေ ..သွားပါဆို နေမှ မသွားသေးဖူး ။ ပေကပ်ကပ်နဲ့ရပ်နေသေးတယ် ..)
သွား ဆို တာ အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုး ရှိတယ်လေ
Go = သွားသည် ၊ ကြိယာ ဝိသေသန ပါ
Teeth( Tooth) = ကိုက်ဖြတ်ဝါးခြေနိုင်သော အရာ ၊ နာမ်နာမ ဝိသေသန ပေါ့
ခုပြောမဲ့အရာက သွားဆိုတာ ပါးစပ်ထဲ မှာတည်ရှိသော ၊ အစားအစာ များကို ကိုက်ဖြတ်ဝါးခြေ နိုင်သော သွား ပါ။ အရွယ်ရောက် ပြီးဖြစ်တဲ့ လူ တဦးမှာ သွား ဘယ်နှစ်ချောင်း ရှိပါသလဲ ။
( မသိသူများ ဂျပန်က ဘလောဂါ အကျော်အမော် မမ တဦးထံတွင် မေးမြန်းစုံစမ်းပါ ။ အဟက် ။ )
ပညာ မရှိတဲ့သူတွေမှာ လည်း ပညာရှိတဲ့ သွားတွေပေါက်ကြ ပါတယ် ။ Wisdom Teeth တဲ့ လေ .. ခေါ်တာတောင် မှ ကြည့်ပါလား လို့ ။သူက ပညာရှိ မို့ လို့နောက်ဆုံးမှ ပေါက် ပြီး နောက်ဆုံး မှာနေတာလေ ။ အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အရွယ် အတွင်းပေါက်တတ်ကြတာ။ အဲဒီ ပညာရှိသွား ၄ ချောင်းပါ ထည့် တွက်ရင် အားလုံးပေါင်း ၃၂ချောင်းပေါ့ နော် ။(၃၆ ချောင်းဟုတ်ဖူး ..အပေါ် အောက် တတန်းစီ ၁၆ချောင်း ..)
ကဲ .. အခု မှန် တချပ် ထ ယူ ။။ သြော်.. သွားလေ .. ဘာလို့ ဆက်ဖတ်နေရတာလည်း ? ?
မှန်ထဲ မှာကြည့်ပြီး ကိုယ့် မှာ သွားဘယ်နှစ်ချောင်းပေါက်ပြီးပြီလည်း ။ ဘယ်နှစ်ချောင်း ကျန်နေသေးသလည်း ။ဘယ်နှစ်ချောင်း ပိုးစားနေသလည်း ။ ပညာရှိ သွားကြီး ၄ ချောင်း ရှိနေသေးလား ။။ ပြန်စစ်ကြည့် ကြပါ ။
ဟိဟိ။။ စစ်ပြီး ပြီလား ။ ? ? ( သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေး ပညာပေး လက်ချာ မဟုတ်လို့ဘယ်လို သွားကျန်းမာအောင် နေရမယ် .စားရမယ် ။သန့် ရှင်းရေးလုပ် ၊ ဂရုစိုက်ရမယ် ဆိုတာတွေ တော့ မပြောတော့ပါ ။ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပဲ ရှာဖတ်ကြပါ ။ ဘော်လီဘော ပုတ်ထုတ် လိုက်ပါပြီ )
သွားပိုးစား ပိုးထိုး နေရင် အမြန်ဆုံးကုသပါ ။ နဲနဲလေး ကျင်လာတာနဲ့ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြီး စစ်ဆေး ၊ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု ကို ခံယူပါ ။
များသော အားဖြင့်တော့ သွားဆရာဝန်ဆီ သွားရမှာ ၊ ဂဒီ ဂဒီ စက်ကြီးနဲ့ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်တာ ။ သွားနှုတ်ရမှာ ။ ထုံဆေးထိုး ရတာ တွေးပြီး ကြောက် နေကြတာ နဲ့ ပဲ အချိန်တွေ ကို တတ်နိုင်သလောက်ဆွဲ ပြီး ၊ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်တော့ မှ သာ အပြေးအလွှား လေး သွားဆေးခန်း ပြေး ကြတာ ပေါ့ လေ။
သွား ဆေးခန်းလေး နဲ့ သွားဆရာဝန်ကိုတော့ ရွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ သွားဆေးခန်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ ။ ဆေးဖိုး ၊ ဝါးခ။ လက်ခ တွေ ကလည်း တနင့် တပိုးကြီး ပေးရတယ် ။
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည် ၊ နိုင်ငံ အရ ပေါ့ နော် ။ ပိုက်ပိုက် ရှိသူများက ဆေးခန်းကောင်းကောင်း ။ ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းတွေနဲ့ ကုသခွင့်ရကြတာ ကံကောင်းလိုက်ကြတာလေ ။ တော်ရုံ တန်ရုံ လူလတ်တန်းစားတွေလည်း သူ့ဟာနဲ့ သူ အထိုက်အလျှောက် ကံကောင်း နေပါသေးတယ် ။ Medicare card နဲ့ Insurance တွေ ရှိကြသူ တွေ အတွက်တော့ သက်သာတာပေါ့ ။
ခု စာဖတ် နေတဲ့ အသင်ဟာ အိန္ဒြိယ နိုင်ငံ ( ကုလားပြည်)မှာ နေထိုင်သူ မျက်နှာမွဲ မဟုတ်ဖို့ တော့ သေချာပါတယ် ။ (၁၀၀ % သေချာတာပေါ့ ။ ဟုတ်နေတဲ့သူကလည်း ဒီ ဘလောဂ် လေးကို ဘယ်မှာ လာ ဖတ်တတ်ပါ့ မလည်း နော်)။ ဒီတော့ ကိုယ်မတွေ့ကြုံရတဲ့ နာကျင် မှုလေး ကို စာနာ သနား စိတ်လေးနဲ့ဒီအောက်က ဗီဒီယို တို လေးကို ကြည့် ပေးပါ နော် ။
အပေါ်က ပုံလေးကို ဒီနေရာ က နေယူထားတာပါ ။
အန် မ လေး ။။။ သနားလည်း သနား စရာ ။ စိတ်လည်း ညစ်စရာ ပါလားကွယ်။။ ပလက်ဖေါင်း မင်းသား သွားဆရာ ဝန် နဲ့လူ နာ ရယ် .
ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့။ ဆေးထိုးအပ်ကလည်း ကူးစက် ရောဂါတွေ ဖြန့် ဝေပေး မဲ့ ပုံ ကြီး ပါလား။
ကဲ ....ဘယ်လိုလည်း ...အဲဒီသွားကြမလား ဟေ ....ဟိဟိ ဒစ်စ်ကောင့် ပေး နေတယ်တဲ့ ။ buy two get one free ! ! တဲ့။
၂ ချောင်းနှူတ် ရင် အလကား ၁ ချောင်း အပို နှူတ်ပေး မှာ တဲ့။ သွား ပြီး သွားလုပ်လိုသူများ စာရင်း ပေးနိုင် ပြီ ။
:kiki : at 7/22/2009 01:09:00 PM
kyalkalay said... | Wednesday, July 22, 2009 6:07:00 PM
အမ ရေ သွားတွေရော့နေတယ်
တချို့ဟာတွေလဲအပြည်. မပါဘူး ဗျ
Anonymous said... | Wednesday, July 22, 2009 7:10:00 PM
လူတစ်ယောက်မှာပေါက်ရမယ့်သွားက တကယ် ၃၆ ချောင်းလား...။ ၃၂ ချောင်းလားဟင်....။
အနော် said... | Wednesday, July 22, 2009 7:38:00 PM
ကြည့်ရတာ နှလုံးမကောင်းလိုက်တာ အမရယ် .. :(
ငယ်ငယ်က သွားနှုတ်ရတာကို သတိရမိတယ် ... :P
ခြေလှမ်းသစ် said... | Wednesday, July 22, 2009 8:11:00 PM
မကီးကီးရေ ... India က အရမ်းတိုးတက်နေတာပဲနော်...ဒါနဲ့ အထက်က Denture ကို မြန်မြန်ပြန်တပ်လိုက်အုံနော် .. တော်ကြာ အပြင်သွားရင် ... မကီကီ အဲ့ဒါကြီး မေ့ကျန်နေအုံးမယ်နော်...
မိုးခါး said... | Wednesday, July 22, 2009 8:15:00 PM
တွေးပြီးတောင် ကြက်သီးထတယ်း(
kiki said... | Wednesday, July 22, 2009 8:25:00 PM
ကို sdl သို့ .... (အနော်နီးမတ်စ် ဆို လို့ပြန်လာဖို့ လမ်းစရှာလိုက်ဦးမယ် )
ဆောရီးပါ ရေပြီးသေချာမစစ်မိတာ ..ခုလို သတိပေး မေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. တကဲ့Permanent teeth က ၃၂ ချောင်းပါ Wisdom teeth ၄ ချောင်း အပါအဝင်ပေါ့ ။ ရေးတာမှားပြီး ၃၆ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ခု ပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါပြီ ။
နောင်ဆို သေချာ ပြန်စစ်ပါမယ် ။
မီးမီးချစ် said... | Wednesday, July 22, 2009 8:44:00 PM
ကြောက်တက်တယ်..ဟိုတခါ အိမ်သာထဲ မှာ အင်္ဂလိပ် မကြီး ကရုတ်တရက်..သွားတုကြီး ချွှတ်ပြီး ပလုပ်ကျင်းတာ တောင် သွားကိုကြည့်ပြီးကြောက်သွားတယ်
thawzin said... | Wednesday, July 22, 2009 9:00:00 PM
ဂျစ် said... | Wednesday, July 22, 2009 10:26:00 PM
နောက်နေ့ သွားဆေးခန်း သွားရမှာ ခတ်လန့်လန့်ဗျ ။
Khyl said... | Thursday, July 23, 2009 12:08:00 AM
နောက်ဆို GO လို့ပြောမှ နားထောင်မယ်... ဒါဘဲ...
ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ မှန်ထယူဦးမလို့ပဲ ...
နောက်တော့လဲ ဂလိုပဲ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ပဲ မယူဖြစ်တော့ဘူး....ဟိဟိ....
Shinlay said... | Thursday, July 23, 2009 12:51:00 AM
အောင်မလေး တော့် လို့ အော်လောက်ပါပေတယ်။
တော်ပါသေးရဲ့ ... ကျမ သွားတွေက မကောင်းဘူး။
သားကြီး said... | Thursday, July 23, 2009 1:10:00 AM
သွားဘူး သွားဘူး :P
The Dentistကားကြည့်ပြီး သွားဆရာဝန်ဆိုလန့်နေတာ ခုထိပဲ
အောက်ကဗွီဒီယိုက ဘောလိဝုဒ်ကThe Dentistကားအသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
သွားနှုတ်တာ ထန်းကနဲနေတာပဲ ဟဟ
မငုံ said... | Thursday, July 23, 2009 1:18:00 AM
သွားဆေးခန်းနဲ့ အဆက်အဆံမလုပ်ပါဘူး။ ကြောက်လို့။ အခုမှ ပိုးစားနေတဲ့သွားလေ ပိုကျင်လာသလိုပဲ။ :) အဲဒီdiscount ပေးတဲ့ ဆေးခန်းလေး လမ်းညွှန်ပေးပါလား။
နောက်ဆို ဂ၇ုစိုက်တော့မယ်နော်။ အပ်နဲ့ထိုးရမဲ့ကိစ္စ ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ခံရမှာ စိုးလို့
rose of sharon said... | Thursday, July 23, 2009 9:38:00 AM
သုခုမလေဒီ said... | Thursday, July 23, 2009 3:22:00 PM
သွားတုကြီးက ဖွားကိတပ်တာလား???း)
အဲဒီ သွားနုတ်လိုက်တဲ့ ကုလားမ ကရော ခုထိ အသက်ရှင်သေးလားဟင်???
မယ့်ကိုး said... | Thursday, July 23, 2009 10:31:00 PM
ဗီဒီယိုထဲက အဲဒီအမျိုးသမီး သနားပါတယ်နော်။
ဝက်ဝံလေး said... | Friday, July 24, 2009 3:38:00 AM
ဖွားကိရေ ဟဟဟ အတော်ပဲ အိမ်ကအကို သွားကိုက်နေတယ် ဆိုပဲ အဲကို ပို့လိုက်မယ် (ဟိဟိ အဲဂလိုချစ်တာလေ အကိုကို) ဟဟဟများကတော့ အမြဲတမ်းသွားကို ကြည့်တယ် ဟိဟိ ယုံလားမသိဘူး မယုံရင်ပုံပြင်မှတ် ဒါပဲ (ဘာမှလှန်မပြခဲ့ပါ)ဘိုင်